Goobaha ganacsi ee sida sharci darrada ah ugu yaalla Waddada Maka Al-mukarama oo la bur buriyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Goobaha ganacsi ee sida sharci darrada ah ugu yaalla Waddada Maka Al-mukarama oo la bur buriyay “SAWIRRO”
Maamulka Gobolka banaadir ayaa xalay howlgallo lagu bur burinayo goobaha ganacsi ee sida sharci darrada ah uga dhisan Waddada hareeraheeda ka ka fuliyay Wadamada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada Ilaada Deegaanka Xamar ayaa howlgalladan lagu bur burinayo goobaha sharci darrada ah ka sameeyay inta u dhexeysa Isgooysyada Jubba iyo Dabka ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qeyb qaadanayay gawaarida dowladda Hoose ee Xamar oo qashinka ka qaadayay meelaha la bur buriyay, iyadoo ujeeddada howlkan uu ahaa dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho, maadaama ay caasimadda u diyaar garoobeyso marti gelinta shirar heerar caalami ah.
Taliyaha Ciidanka ilaalada deegaanka Xamar Gaashaanle Sare Axmed Xuseen Mahdi oo Warbaahinta kula hadlay isgoyska dabka ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa iyo inta ay wadada hareeraheeda ka qaadayaan sandaqadaha ganacsi ee sida sharci darrada ah u yaalla Wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho oo halbowlo u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Kaaliyaha duqa magaalada Muqdisho ee dhanka dowladda Hoose ee Xamar Sheekh Cumar ayaa tilmaamay in bur burinta goobaha sharci darada ah looga dhistay wadada hareeraheeda uu yahay amar ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha gobolka Benaadir.
Xalay saqdii dhexe ayay ahayd markii ciidanka Ilaadaha deegaanka Xamar ay howgalladan ka fuliyeen Wadada Maka Al-mukarama, kaasi oo qeyb ka ah dadaallada uu maamulka Gobolka ugu jiro dib u soo celinta bilicdii ay caasimaddu lahayd.
Southampton oo Ka Adkaatay Kooxda Newcastle United “Sawirro”